AFG Caravelle အကူအညီကျေးဇူးပြုပြီး
မေးခွန်း AFG Caravelle အကူအညီကျေးဇူးပြုပြီး
1 months ago 10 တစ်နှစ် - 1 months ago 10 တစ်နှစ် #568 by calypso999
ငါ FS9 အတွက် AFG Caravelle ပျံသန်းကိုချစ်လေ့ရှိတယ်။
ငါသည်သင်တို့၏ site ကိုဖြတ်ပြီး လာ. , Caravelle ကိုတွေ့လိုက်တယ်။ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး, ကျွန်မကြောင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နဲ့ကျွန်မ (စသည်တို့ကို PT Tu-154B2 DC-9) ရှုပ်ထွေးသောလေယာဉ်နံပါတ်ရှိသည်ဘယ်မှာ FSX ရေနွေးငွေ့များပေါ်တွင် install ။
installation ကောင်းစွာ သွား. ငါမကြာမီအဟောင်းအကျွမ်းတဝင် Caravelle panel ကိုတင်ဆောင်ကြောင်းရှိခဲ့ပါတယ်။
အင်ဂျင်ချောချောမွေ့မွေ့ start ဖို့ငြင်းဆန်။ သူတို့တစ်တွေအချို့သော RPM ကိုရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်ငါက start အဆိုပါ revs ရုံရှိနေဖို့ valves ဖွင့်လှစ်သည့်အခါ။ အဘယ်သူမျှမက start ။
ငါသည်ငါ့ခတ်လုပ်ကိုင်ဖို့မရနိုင်ပါ။ အဆိုပါခတ် gauge နှင့်ခတ်သူတို့ကိုယ်သူတို့မရှိလှုပ်ရှားမှုအပေါ်အဘယ်သူမျှမလှုပ်ရှားမှု။
ငါမဆိုအကူအညီတောင်း / အကြံပြုချက်များများအတွက်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။
ငါ့ကိုရန် panel က / gauge ပြဿနာနှင့်တူခံစားရ၏။ အတူတူအတွေ့အကြုံ please25 ရှိခြင်းရေနွေးငွေ့အပေါ်အခြားမည်သူမဆို?
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်: 1 တစ်နှစ် 10 months ago နေဖြင့် calypso999.
0.315 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်